बाँझोपन पुरुषमा पनि हुन्छ,महिलालाई मात्र दोष दिनु गलत हो : डा. नूतन शर्मा (भिडियो)
- संगीता अधिकारी
२०७७ भदौ १४ आइतबार १४:४७:००
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले नेपालमा गर्भवती महिलाहरुमा निकै असर पु¥याएको छ । गर्भवती महिलाहरुमा कोरोनाको संक्रमण छिटो हुन सक्ने चिकित्सकहरु बताउँछन । तर कोरोनाको कहरकै बीच पनि गर्भवती महिलाहरुमा नियमित फलोअपदेखि जटील अवस्थामा उपचार अनिवार्य छ । यसैसन्दर्भमा हामीले वरिष्ठ स्त्रीरोग एवं बाँझोपन बिशेषज्ञ डा.नुतन शर्मासँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ टिभी अन्नपूर्णका लागि शर्मासंग संगीता अधिकारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
अहिले गर्भवती महिलाहरुलाई कसरी सेवा दिइरहनुभएको छ ? कोरोनाले कत्तिको असहज भैरहेको छ ?
कोरोनाको महामारी कै बिचपनि बिरामीहरुलाई हामीले सेवा दिइरहेका छौं । नियमित जाँचमा आउने बिशेषतः गर्भवती महिलालाई मुख्य स्वास्थ्या सुरक्षा चुनौति छ । बिरामीहरुको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै आफू पनि सुरक्षित भएर नियमित उपचार गरिरहेका छौं ।
गर्भवती महिलाहरु बाहेक अन्य महिलाहरुमा पछिल्लो समय कस्ता कस्ता समस्या लिएर आउनु भएको छ यहाँकोमा ?
१० बर्षको अवधिलाई हेर्ने हो भने पहिला–पहिला पाठेघरको समस्या लिएर कम बिरामी आउनुहुन्थ्यो तर आजभोली पाठेघरको ट्युमरको समस्या लिएर निकै बिरामी आउनुहुन्छ । अविवाहित महिलाहरुमा पाठेघरको ओभरियन सिस्टको समस्या पनि बढेको देखिन्छ । पछिल्लो समय धेरै महिलाहरुमा बाँझोपनको समस्या बढेको देखिन्छ ।
पाठेघरमा ट्युमर के कारणले हुन्छ ?
पाठेघरमा ट्युमर यो नै कारणले हुन्छ भन्ने अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन । तर कतिपय महिलाहरुमा बंशाणुगत गुणले पनि प्रभाव पारिरहेको देखिन्छ । जस्तै एउटी महिलालाई ५ वर्ष अगाडी ट्युमर भएको थियो भने उसको छोरीलाई पनि भएको केसहरु हामीकहाँ आउनुहुन्छ । अनि अर्को मुख्यकुरा भनेको अहिलेको अस्वस्थ्यकर खानपान र जीवनशैलीले पनि हो । महिलाहरु बढी चिन्तित हुने गर्दछन्, यसले पनि उनीहरुको प्रजनन स्वास्थ्यमा असर पु-याईरहेकोे हुन्छ । सुरुमा त यसको पहिचान गर्न निकै समस्या हुन्थ्यो, तर आजको दिनसम्म पहिचान गर्न सजिलो छ । बिरामीको संख्या पनि उत्तिकै बढेको छ,र समयमै पहिचान गर्न पनि सजिलो बनेको छ । अहिले अप्रेशन नगरी पनि ल्याप्रोसकोपी बिधिबाट हामीले उपचार गरिरहेका छौं ।
ल्याप्रोस्कोपी सर्जरी भनेको के हो ? कस्ता महिलाहरुलाई यो आवश्यक पर्छ ?
बिषेशतः मैले दुईखाले बिरामीको उपचारमा काम गर्दै आएको छु,ल्याप्रोस्कोपी र टेस्टट्युब–बेबी । नेपालमा अझैपनि उपयुक्त बाँझोपन उपचार केन्द्र छैनन् । तर निःसन्तान दम्पतिको पिडा धेरै छ । यहि कुरालाई मध्यनजर गर्दे मैले यो दुईवटै कुरा स्थापना गरिसकेको छु । पहिले–पहिलेको जस्तो समस्या पहिचान गर्न अहिले गाह्रो छैन । प्रबिधिको बिकाससँगै उपचारमा पनि निकै सहज भएको छ । ल्याप्रोस्कोपी सर्जरी पनि स्त्रीरोग उपचारमा एक नयाँ प्रबिधि हो । पहिले पेट चिरेरै अप्रेशन गरिन्थ्यो भने अहिले पेटमा पलाएका मासुहरु ल्याप्रोस्कोपी मार्फत हटाउन सकिन्छ । म निकै खुसी छु कि, अत्याधिक मोटोपन अर्थात ९७ केजी तौल भएकी एक महिलाको यो भन्दा अगाडी तिनपटक अप्रेशन मार्फत बच्चा जन्माएको र पछि पाठेघरमा ट्युमर भएको रहेछ । मैले ल्याप्रोस्कोपी सर्जरी मार्फत निकै ठुलो ट्युमर निकाले । उहाँ यति खुसी हुनुभयो कि उहाँको खुसी नै हाम्रो सफलता हो । त्यतिबेलै अर्को बेडमा पनि एकजना महिलाको पनि उस्तै समस्या थियो । उहाँले म पनि ल्याप्रोस्कोपी गर्ने डा.साब भन्दा खुशी लाग्यो । ल्याप्रोस्कोपीको बारेमा निकै मान्छेलाई भ्रम छ । कतिपयले ल्याप्रोस्कोपी गर्दा पेटमै मासुको टुक्रा छोडिन्छ, नराम्रो हुन्छ भन्छन्,यो गलत हो । दुरबिनको माध्यम मार्फत उपचार गरिने बिधि हो । हाम्रो आँखाले समेत देख्न नसक्ने कणहरु दुरबिनले देख्न सक्छ । अप्रेसन गरेपछि दुई महिनासम्म आराम गर्नुपर्ने हुन्छ भने ल्याप्रोस्कोपी सर्जरी गर्दा बिरामी ४÷ ५ दिनमै निको भएर घर जान सक्नुहुन्छ । त्यसैले यो प्रभावकारी माध्यम हो । नेपालमा आइभीएफलाई पनि हामीले त्यो लेभलसम्म लगिसक्यौं । एक समय थियो, बिरामी जम्मा गरेर विदेशबाट डाक्टर आएर उपचार गर्नुपथ्र्यो भने अहिले हामी दैनिक गरिरहेका छौ । जो बिरामीले जतिबेला चाहनुहुन्छ त्यो बेला सम्भव छ
आइभिएफ भनेको के हो यसका उपचार बिधिहरु के के हुन ?
आइभीएफ भनेको निःसन्तान दम्पतिका लागि उपयुक्त उपचार पद्धती हो । आइभिएफ गर्ने दुई तरिका हुन्छन् । एउटा भनेको जसको वर्षौंदेखी निःसन्तान भएर बसेका दम्पति छन् । हामीले एउटा सुई दिन्छौं । र बिरामीको पेट भित्र अण्डा बनाएर बाहिर निकाल्छौ । त्यसपछि ल्याबमा बेबी बनाउछौं,एम्ब्रोइज बनाउँछौं । र पछि पाठेघरमा सार्छांै । त्यसपछि राम्रो हुने वा नहुने भन्ने पहिचान गरेपछि बिरामीको अनुकुलता अनुसार नियमित पलोअप गर्छौं । अन्य उपचारको तुलनामा केहि महंगो भएपनि यो उपचार बिधि प्रभावकारी बन्दै गएको छ । अहिलेको अबस्थामा आइपुग्दा धेरै मान्छेले यो कुरा बुझ्न थालेका छन् । कतिपय बिदेशीहरु समेत नेपालमा आएर उपचार गरेको देख्दा गुणस्तरिय उपचार दिन सफल भएछौैं भन्ने खुसी लाग्छ ।
अप्रेसन र ल्याप्रेस्कोपी सर्जरीमा के भिन्नता छ ?
अप्रेसन भनेको पेट काटेर वा चिरेर गरिन्छ भने ल्याप्रोस्कोपी भनेको पेट नकाटी नचिरी दुरबिनको सहयोगमा पेटमा साना प्वाल पारेर गरिने उपचार बिधि हो । हाम्रो आखाँले देख्न नसकिएका मासुका रेसाहरु दुरबिनको सहायताले प्रष्ट देखिन्छ । झन् म्याग्नीफिकेसन प्रक्रियाबाट छुट्याउन सहज हुन्छ । हामीले सोच्दै नसोचेका ठूल्ठूला ट्यूमरहरुको पनि ल्याप्रोस्कोपी बिधिमार्फत उपचार गरिरहेका छौं । केहिदिन अगाडी मात्रै १८ वर्षको महिलाको पेटमा ट्युमर भएको थियो । मैले ल्याप्रोस्कोपीबाटै उसको सहज उपचार गरें । उनी अहिले स्वस्थ्य छिन् र उ ३÷४ दिनमै हिड्न सकिन् । भनेपछि धेरै प्रविधिको बिकास भैसकेको छ । डेलिभरी केसबाहेक स्त्रीरोगका अन्य धेरैै समस्या ल्याप्रोस्कोपी बिधिबाट उपचार गर्न सम्भव छ ।
नेपालमा ल्याप्रोस्कोपी सर्जरी पछिल्लो समय कत्तिको प्रभावकारीे छ त ?
मलाई एकदम खुसी लाग्छ कि शुरुशुरुमा मानिसहरुलाई यो बिधिका बारेमा बुझाउन विश्वास दिलाउनै कठीन थियो । तर ५ ÷६ बर्षयता मानिसहरुको सोंचमा धेरै परिवर्तन आईसकेको छ । शुरुमा दूरबिन पद्धतिबाट उपचार गर्नै नमान्ने महिलाहरु पनि धेरै ठाउँमा धाएर आजित भएपछि हामीकहाँ आउन थालेका छन् । पहिले भन्दा अहिले धेरै मानिस सचेत हुँदै आएका छन् । यो खुसीको कुरा हो ।
यो उपचार बिधि कत्तिको महंगो छ ?
यो पनि महत्वपूर्ण कुरा हो । कतिलाई लाग्न सक्छ आधुनिक चिकित्सापद्धति भएकाले यो उपचार बिधि एकदम महंगो हुन्छ । ओपन सर्जरीमा लाग्ने खर्चको तुलनामा यो २० प्रतिशत मात्रै महंगो छ । किनकी यसमा लाग्ने उपकरणहरु गुणस्तरीय छन् । यो सरल र छिटो उपाय हो । बिरामीलाई दीर्घकालिन रुपमा राम्रो हुने भएकाले पनि अन्य उपचारको तुलनामा सेवा महंगो हुन गएको हो ।
विवाहित महिलामासमस्या बढी हुन्छ कि अविवाहित महिलामा ?
बिशेषतः यस्तो समस्या अविवाहित महिलामा बढि पाएका छौं । बच्चा जन्माएको महिलामा यसको समस्या कम हुने गरेको छ । २० देखी ४० वर्षको अविवाहित महिलामा यसको समस्या बढि देखिएको छ । पानीको फोका र सिस्ट पलाउने जस्ता समस्याका बिरामी देखिएको छ ।
गर्भवती महिला,जो डेलिभरी हुने अबस्थामा हुनुहुन्छ उहाँहरुले अहिलेको अबस्थामा के के कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ ? नियमित जाँचलाई कसरी सहज बनाउने ? सल्लाह सुझाव के के छन् यहाँको ?
कोरोना भाइरसको डर त्रास हामी सबैलाई छ, स्वास्थ्यकर्मीलाई त झन् बढी । जोखिमका बाबजूद पनि बिरामीको सेवामा खटिनुपर्ने अबस्था छ । तर यसको उपाय पनि हामीसँग छ । हामीले स्यानिटाईजर नियमित लगाउनुपर्छ । उहाँहरुलाई पनि म यहि भन्न चाहन्छु कि मास्क,स्यानिटाइजर,र सामाजिक दुरी अनिवार्य कायम राख्न सल्लाह दिन्छु । गर्भवती महिलाले प्रसस्त खानेकुरा खाने आफ्नो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने , राम्रो खानपान गर्ने,भिटामिनयुक्त खानेकुरा खाने । स्वास्थ्य राम्रो छ भने कोरोनाको संक्रमण भैहाल्दैन । तर जो गर्भवती महिला हुनुहुन्छ, उहाँलाई सुगर,प्रसर थाइराइड जस्ता अन्य रोग छन् भने उहाँहरुले बढी ख्याल पु-याउन अनुरोध गर्दछु ।
बाँझोपनको समस्या महिला पुरुष दुबैमा हुन्छ कि महिलामा मात्रै हुने समस्या हो ?
बाँझोपनको समस्या महिला र पुरुष दुबैमा हुने गर्दछ । हाम्रो समाजमा महिलालाई मात्रै बाँझोपनको समस्या हुने भन्ने गलत धारणा छ, हामीले यसलाई प्रष्ट पार्न जरुरी छ । मैले उपचार गर्दा महिला र पुरुष दुबै श्रीमान श्रीमतीलाई सँगै बोलाउने गर्दछु । श्रीमान श्रीमती दुबै भएर न बच्चा जन्माउन सम्भव छ र त्यसैले अध्ययन र उपचारका लागि दुबैजनाको उत्तिकै योगदान हुन्छ । महिलालाई मात्रै दोष दिनु अति नै गलत हो । अहिले उपचार एकदमै सहज भैसक्यो तर पनि समाजले हेर्ने दृष्टिकोण अझै परिवर्तन हुन सकेको छैन । यो कुरा हामीले समाजलाई पनि बुझाउँन अत्यन्तै जरुरी छ । जसरी बच्चा भैसकेपछि एउटा परिवार खुसी हुन्छ, त्यस्तै बच्चा नहुँदा पनि श्रीमान श्रीमती दुबैको भुमिका उत्तिकै छ । नेपाली समाजमा बच्चा भएन भने घरपरिवारले नै हेला गर्ने सर्पोट नगरेको देखिन्छ । परिवारको सर्पोट भएपछि महिलामा फिजिकल्ली पनि सकारात्मक उर्जा आउँछ त्यसैले सबैको सर्पोट हुन जरुरी छ ।
आईभीएफ उपचार पद्धतिमा उपचार असफल हुने सम्भावना चाहिं कत्तिको रहन्छ ? कस्तो अवस्थामा तपाईंहरुको मेहनत खेर जाने देख्नुभएको छ ?
एउटा कुरा तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ कि यसको उपचार कस्को सफल हुन्छ कसको हुँदैन भन्नै सकिंदैन । एक बर्ष अगाडि एकमात्र सन्तान गुमाएकी ६४ बर्षीया महिला मकहाँ आउनुभयो, जसको महिनावारी पनि सुकिसकेको थियो । बच्चा हुन्छ भन्ने त उहाँहरुले कल्पना समेत गर्नुभएको थिएन । तर भाग्यबस जुम्ल्याहा टेस्टट्युब सन्तान भयो । भनेपछि हामीले शतप्रतिशत सफल बनाउन कोशीस गरेका हुन्छौं । त्यति गर्दा पनि कसैकसैको बच्चा नभएको पनि हुन्छ, त्यो कस्तो खालको बिरामी छ, त्यसमा पनि भर पर्छ । अहिले सम्मको अवधिमा नसकेको र नभएको केस हाम्रोमा छैन । मात्रै उहाँहरुले पनि भनेबमोजिमको सल्लाह मान्नुभयो र निरन्तर उपचारमा संलग्न हुनुभयो र साथ दिनुभयो भने सम्भव छ । असम्भव हुने केसहरु पनि हामीले सम्भव गरेका छौं । डेलिभरी केस बाहेकका महिलाहरुमा हुने जटील समस्या बिदेशमा गएर उपचार गर्नुपथ्र्यो विगतमा भने अहिले नेपालमै सम्भव छ । हामी परम्परागत मान्यताबाट माथि उठ्न सक्यौं भने बाँझोपनको निराकरण गर्न सकिन्छ । हामीले नेपालको सबैभन्दा ठुलो आइभीएफ सेन्टर खोल्दैछौैं । अब कोहि कसैले पनि बिदेशमा उपचार गराउन जान नपरोस र निसन्तान भएर बाँच्नु नपरोस भनेर लागिरहेका छौं । सबै सुबिधा सहितको आईभीएफ सेन्टर स्थापना गर्ने त्यो सपना केहि महिनामै पूरा हुँदैछ ।
नेपालमा बाहिरी देशका मान्छे पनि उपचार गर्न आउँछन् ? आएका छन् ?
आउनुहुन्छ । मसँग चाइनाको बिरामी हुनुहुन्छ , अमेरिकाको बिरामी हुनुहुन्छ । उहाँहरुको पनि राम्रो उपचार भएको छ । नेपालमा मात्रै यसको समस्या भएको छ भन्ने होइन । विकसित देशहरुमा पनि बाँझोपनको समस्या उस्तै छ ।
बाँझोपनको समस्या भएका दम्पतीले के के कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ ?
मुख्यकुरा त कोहि कसैलाई पनि बाँझोपनको समस्या नहोस भन्ने चाहन्छु । बाँझोपन हुन नदिनु नै सबैभन्दा उत्तम उपचार हो । हामीसँग उपचार त छँदैछ । बाँझोपनको उपचारमा समयको नास हुन्छ,पैसा खर्च हुन्छ मान्छे मानसिक रुपमा पनि तनावमा हुन्छ । त्यसैले समयमै बिवाह गर्न,समयमै बच्चा जन्माउन सल्लाह दिन्छु । असुरक्षित गर्भपतनले पनि बाँझोपनको समस्या निम्त्याउँछ । संक्रमणको समस्या,महिनावारी गडबडी छ भने पनि समयमै उपचार गराउनुहोस् । जुनसुकै रोगको समस्या भएपनि समयमै उपचार गराउनुपर्छ । समयमै रोगको पहिचान भयो भने उपचार सम्भव छ । यति सामान्य कुरालाई ध्यानमा राखियो भने ६० प्रतिशत रोगको निराकरण गर्न सकिन्छ । त्यतिगर्दा पनि भएन भने हामी छांै ।
यहाँले स्त्रीरोग बिशेषज्ञको रुपमा लामो समय सेवा गरीसक्नुभएको छ । नेपालमा बाँझोपनको समस्यामा पहिले र अहिले कत्तिको परिवर्तन पाउनुभएको छ ?
धेरै नै परिवर्तन पाएको छु । आजको दिनमा बिरामी खुलेर कुराकानी गर्छन । पहिले आफ्नो समस्या खुलेर नभनिदिने, लाज मान्थे, जसले गर्दा उपचारमा हामीलाई अन्योल हुन्थ्यो । अहिले त धेरै परिवतर्न भैसकेको छ । ७÷८ वर्ष अगाडिसम्म उपचार गर्न आउनेहरु आफ्नो बाँझोपनको बारेमा परिवार र आफन्तलाई थाहा होला कि भनेर डर मान्ने अवस्था थियो । अहिले त उहाँहरु त्यस्तो अफ्ठ््यारो महशुस नगरी प्रसस्त समय मिलाएर आउनुहुन्छ । पहिला पहिला बाँझोपनको समस्या लुकाएर समाजबाट अपहेलित भएर धेरै महिलाहरु बस्नु भएको थियो । उहाँहरु उपचारमा समेत आउन नचाहेर निःसन्तान बस्नु परेको छ । अहिले समस्या बढेपनि उपचार पनि सम्भव भैसक्यो । उमेर गैसक्यो अब बच्चा जन्माएर के गर्ने भन्ने मानसिकता अझै छ रहर हुँदाहुँदै पनि बरु अरुकै बच्चा पाल्छु भन्ने मानसिकता अझै छ । यसलाई बुझ्न बिरामीले सकेभने जुनसुकै अबस्थामा पनि उपचार सम्भव छ । पहिलाको जस्तो औषधि नपाउने छैन । उपकरणहरुको बिकास भैसकेको छ । सबै कुरा भैसकेपछि मान्छे निःसन्तान भएर किन निरास हुने ? समस्या भएपछि समाधान पनि छ नि ।
नेपालमा हाल सबैखाले उपचार सहज बनिसकेको छ । मात्रै डाक्टरप्रति बिरामीले बिश्वास गर्न जरुरी छ । आफ्नो समस्या खुलेर भन्ने र समस्याको पहिचान गर्न डाक्टरलाई सहयोग गरे समस्याको समाधान हुन सक्छ । सोच्नै नसक्ने समस्याको पनि हामीले उपचार गरेका प्रसस्तै उदाहरण छन् । त्यसैले खुलेर बाँझोपनको समस्या डाक्टर समक्ष भन्न अनुरोध गर्दछु ।